sevhisi Service - China sevhisi Kwayedza, Gwaro
Chii chinonzi GOST-R Kuzivisa? GOST-R Chiziviso cheConformity igwaro rekuzivisa kuratidza kuti zvinhu zvinoteererwa nemitemo yekuchengetedza yeRussia. Pakaburitswa Mutemo weChigadzirwa uye Certification Service neRussia Federation muna 1995, yekumanikidza yechigadzirwa chitupa sisitimu yakatanga kushanda muRussia. Zvinoda kuti zvigadzirwa zvese zvinotengeswa mumusika weRussia kuti zvidhindwe neGOST inosungirwa chitupa chiratidzo. Seimwe yenzira dzekusungirwa kuenderana chitupa, Gost-R Chiziviso cheConformi ...
Chii chinonzi cTUVus & ETL CERTIFICATION? OSHA (Occupational Safety uye Health Administration), yakabatana neUS DOL (Dhipatimendi reVashandi), inodaidzira kuti zvigadzirwa zvese zvinoshandiswa munzvimbo yebasa zvinofanirwa kuyedzwa uye kusimbiswa neNRTL isati yatengeswa mumusika. Anoshanda ekuyedza zviyero zvinosanganisira American National Standards Institute (ANSI) zviyero; American Society for Testing Material (ASTM) zviyero, Underwriter Laboratory (UL) zviyero, uye fekitori mutual-inozivikanwa sangano rakamira ...
Chii chinonzi WERCSmart Kunyoresa? WERCSmart chidimbu cheWorld Environmental Regulatory Compliance Standard. WERCSmart ikambani yekunyoresa dhatabhesi inogadzirwa nekambani yeUS inonzi The Wercs. Inovavarira kupa inotarisisa chikuva chekuchengetedza zvigadzirwa kune supermarket muUS neCanada, uye kuita kuti zvigadzirwa zvitenge zvive nyore. Mukuita kwekutengesa, kutakura, kuchengetedza nekurasa zvigadzirwa pakati pevatengesi uye vanogashira vanogashira, zvigadzirwa zvinotarisana nekuwedzera kubatana ...
Chii chinonzi CE Certification? Mucherechedzo weEC "pasipoti" yezvigadzirwa zvinopinda mumusika weEU nemusika wenyika dzeEU Free Trade Association. Chero zvigadzirwa zvakatemwa (zvine chekuita nenzira nyowani yekuraira), zvingave zvakagadzirwa kunze kweEU kana munyika dzenhengo dzeEU, kuti zvitendeke zvakasununguka mumusika weEU, zvinofanirwa kunge zvichitevedzera zvinodiwa nemirairo uye nematanho anowirirana asati ave yakaiswa pamusika weEU, uye unamira chiratidzo cheEC. Ichi ndicho ...
ErtCertification Overview Maitiro uye Certification Gwaro Yeyedzo bvunzo: GB31241-2014: Lithium ion maseru uye mabhatiri anoshandiswa mune inotakurika zvigadzirwa zvemagetsi Zuva rekuitwa 1. GB31241-2014 rakaburitswa muna Zvita 5, 2014; 2. GB31241-2014 yakashandisirwa nenzira yechiremera muna Nyamavhuvhu 1, 2015; 3. Muna Gumiguru 1 ...
Chii chinonzi ANATEL Homologation? ANATEL ipfupi kune Agencia Nacional de Telecomunicacoes inova hurumende yeBrazil masimba ekuzivisa zvigadzirwa zvekutaurirana kune zvese zvinomanikidzwa uye zvekuzvidira. Kubvumidzwa uye kutevedzera maitiro zvakaenzana kune zvigadzirwa zveBrazil zvemuno nekunze. Kana zvigadzirwa zvichishandiswa mukumanikidza kupihwa chitupa, mhedzisiro yekuyedza uye mushumo zvinofanirwa kunge zvichienderana nemitemo yakatemwa nemirau sekukumbirwa naANATEL. Chitupa chechigadzirwa ...
Chii chinonzi TISI Certification? TISI ipfupi kune Thai Industrial Standards Institute, inobatana neThailand Viwanda department. TISI inoona nezve kuumba zviyero zvemumba pamwe nekutora chikamu mukuumbwa kwemitemo yenyika dzepasi rose uye kuongorora zvigadzirwa uye nzira yekuongorora inokwanisa kuona kutevedza kwakaringana uye kuzivikanwa. TISI isangano rinotenderwa nehurumende rinotemerwa zvekumanikidza kuThailand. Izvo zvakare zvine basa re ...
Chii chinonzi PSE Certification? PSE (Chigadzirwa Kuchengetedzwa kweMagetsi Magetsi & Chinyorwa) inosungirwa certification system muJapan. Iyo inonzi zvakare 'Kuteedzerana Kuongorora' iyo inosungirwa kuwana musika yekuwana system yezvinhu zvemagetsi. PSE Certification inoumbwa nezvikamu zviviri: EMC uye chigadzirwa chengetedzo uye zvakare yakakosha murau weJapan chengetedzo mutemo wemagetsi mudziyo. ErtCertification Standard ye lithiamu mabhatiri Dudziro yeMeti Ordinance yeTechnical Requ ...
Chii chinonzi KC? Kubva 25th Nyamavhuvhu, 2008 ， Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) yakazivisa kuti National Standard Committee ichaita nyowani yenyika yakabatana chitupa chiratidzo - inonzi KC mucherechedzo ichitsiva Korean Certification panguva iri pakati paKurume. 2009 naZvita 2010. Magetsi Midziyo. chengetedzo chitupa scheme (KC Certification) inosungirwa uye kuzvidzora-yega chengetedzo yekusimbisa sisitimu zvinoenderana neMagetsi Midziyo Yekuchengetedza Kudzora Mutemo, chirongwa chakaratidza kuchengetedzeka ...
MIBSMI Nhanganyaya Kutanga kwe BSMI certification BSMI ipfupi kune Bureau yeMitemo, Metrology uye Kuongorora, yakagadzwa mu1930 uye inonzi National Metrology Bureau panguva iyoyo. Ndiro repamusorosoro rekuongorora sangano muRepublic of China rinoona nezvebasa renyika zviyero, metrology uye kuongorora kweyakagadzirwa, nezvimwewo. Zvigadzirwa zvinogoneswa kushandisa BSMI kutara pamamiriro ezvinhu avari mu c ...
HatChii chinonzi CB Certification？ IECEE CB ndiyo yekutanga sisitimu yepasi rose yekubvuma kwese kwemagetsi emagetsi ekuchengetedza bvunzo. NCB (National Certification Body) inosvika pachibvumirano chemarudzi akawanda, icho chinogonesa vagadziri kuwana chitupa chenyika kubva kune dzimwe nyika dziri nhengo pasi pechirongwa cheCB pahwaro hwekuchinjisa chimwe chezvitupa zveNCB. Chitupa cheCB igwaro rakarongeka reCB rakapihwa nemvumo NCB, inova yekuzivisa imwe NCB kuti yakaedzwa pr ...
Chii chinonzi CTIA CERTIFICATION? CTIA, kupfupikiswa kweCellular Telecommunications neInternet Association, isangano risingabatsiri revanhu rakagadzwa muna1984 nechinangwa chekuvimbisa kubatsirwa kwevanoshanda, vagadziri nevashandisi. CTIA ine vese vashandisi veUS uye vagadziri kubva kune nharembozha masevhisi, uye zvakare kubva kune isina waya data data uye zvigadzirwa. Ichitsigirwa neCCC (Federal Communications Commission) neCongress, CTIA inoita chikamu chikuru chemabasa nemabasa t ...